यसकारण प्रेमीसँग झगडा गर्नु राम्रो हुन सक्छ !￼ « Sudoor Aaja
१२ बैशाख २०७९, सोमबार १०:२१
सुदूर आज १२ बैशाख २०७९, सोमबार १०:२१
सीएनएन । कुनैपनि प्रेम सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै सद्भावपूर्ण, इमान्दार अनि खुला भएर कुरा गर्नु हो । यसलाई प्राथमिकतामा राखे मात्र दुवैजना खुसी हुन सक्ने बताइन्छ ।
फिलाडेल्फियास्थित थेरापिस्ट केटिलिन केन्टोर भन्छिन्, “झगडाबाट टाढा रहन खोज्नुले लामो समय काम गर्दैन । यदि तपाईँले झगडा गरेर भएपनि आफ्नो पार्टनरलाई बुझ्नुहुन्छ, भिन्नता कम गर्न सक्नुहुन्छ भने किन त्यसो नगर्ने ? त्यस किसिमको झगडा सधैँ स्वस्थकर नै हुन्छ ।”
उनले थप भने, “यदि कसैलाई एकदम आक्रोशित महसुस भइरहेको छ भने एकपटक सोच्ने, मलाई किन यो सानो कुराले यति धेरै रिस् उठिरहेको छ ? यसले हामीलाई मुख्य समस्या अरु नै कुरा भएको आभास गराउँछ । त्यसैले समय मिलाएर आफू किन खुसी हुन सकिरहेको छैन भन्नेमा पार्टनरसँग छलफल गरेमा यसले सम्बन्ध सुधार्न उल्लेखनीय मद्दत गर्न सक्छ । ”